रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जान्नुहोस्; कुन खानेकुराबाट कस्तो पोषक तत्व पाइन्छ ? | Public 24Khabar
Home Health रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जान्नुहोस्; कुन खानेकुराबाट कस्तो पोषक तत्व पाइन्छ ?
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन जान्नुहोस्; कुन खानेकुराबाट कस्तो पोषक तत्व पाइन्छ ?
खाना नै ओखती हो । अर्थात हाम्रो प्राण बचाउन मात्र होइन, निरोगी राख्न, तन्दुरुस्त राख्न, उर्जावान राख्न पनि खानेकुराकै भूमिका हुन्छ । खानेकुराले नै हामीलाई बलियो, स्वस्थ राख्छ । शरीरमा लाग्ने अनेकन रोगबाट बचाँछ ।
Previous articleकोरोनाको नाममा अस्पतालले जिउदै मान्छे मारेर आँखा चोरी ! सडकमै छोरी र श्रीमती रुवाबासी, तोडफोड
Next articleभर्खरै बिरअस्पताल भित्र २ आखा निकाली अदक्ष्यको गरे ड-रलाग्दो ह-त्या,घाँटी काटियो-भेटियो प्रमाण…